Lalam-pahafahana sarotra nodiavin’ny Syriana iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Marsa 2019 5:54 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, Español, русский, Italiano, 日本語, English
Nahazoana alalana. Firas any Avaratr'i Syria taorian'ny fifindrana.
Anisan'ireo tanàna natao fahirano ny toerana nahaterahan'i Firas, Douma. Namaritra ny fahirano ho “barbariana sy medievaly” Ny Vaomieran'ny Firenena Mikambana momba ny fanadihadiana ao Siria. Heloka an'ady maro sy heloka bevava maro manoloana ny maha-olona no nitranga nandritra ny fahirano naharitra dimy taona, manomboka amin'ny fampiasana fitaovam-piadiana voarara ka hatramin'ny fampielezana ny mosary ho toy ny fomba fiady.
Ny fanafihana simika tamin'ny 21 Aogositra 2013 no trangan-javatra nahafaty ny sivily be indrindra tao amin'ny faritra. Io fanafihana io koa no fampiasana fiadiana simika faran'izay ratsy indrindra nandritra ny 25 taona.
Nanamafy ny tatitra iray avy amin'ny Firenena Mikambana fa natao tamin'ny fampiasana balafomanga kely feno singa “sarin” hatramin'ny 60 litatra ny fanafihana. Araka ny sasiteny fanombanana nataon'ny governemantan'i Etazonia, naningotra ain'olona maherin'ny 1400 izany ka anisan'izany ny ankizy 426 fara fahakeliny.
Na dia tsy nanome tsiny ny fanafihana aza ny tatitra nataon'ny Firenena Mikambana dia loharanom-baovao maro samihafa no nilaza fa notanterahan'ny governemanta siriana izany. Nanazava i Peter Bouckaert, manam-pahaizana momba ny fitaovam-piadiana ao amin'ny Human Rights Watch fa fantatra ho ao anatin'ny fitaovam-piadian'ny tafika siriana ny balafomanga kely nofantarina tao amin'ny tatitry ny Firenena Mikambana.
Ny volana manaraka, nisy barika nitondra sarin nalatsaka tao an-tanàna ary namono olona 70 farafahakeliny. Nitatitra ny mpitsabo tany an-toerana fa nifanaraka tamin'ny fatran'ireo fanafody mampidi-doza ny soritr'aretin'ireo notsaboina
Notondroin”ireo mpikatroka ao an-toerana, mpiaro ny zo maha olona ary firenena maromaro ho ny fitondrana Syriana no nanao ny fanafihana. Nanambara i Rosia mpiara-miombon'antoka amin'ny fitondrana fa tsy nisy fanafihana nitranga ary nomanina sy notarihan'ny sampam-pitsikilovana Britanika ny porofo araka ny lahatsary.